घर अफ्रिकी फुटबल स्टोरीहरू आर्थर मासुआकु बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो आर्थर मासुआकुको जीवनीले तपाईंलाई उसको बाल्यकाल कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी हुनु, जीवनशैली, नेट वर्थ र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू बताउँछ।
हामीसँग यहाँ छ कole्गोलिसको संक्षिप्त जीवन कहानी - शुरुआती दिनदेखि लिएर, जब उसले प्रख्यात पदहरू पाए। मसुआकूको बायोको आकर्षक प्रकृतिमा तपाईंको भोक जगाउनको लागि, यहाँ उनको जीवन र क्यारियरको प्रगति को चित्रण सार हो।
आर्थर मासुआकुको जीवन कहानी।
हो, तपाईं र म आर्थरलाई टेक्निकल ड्रिब्लरको रूपमा चिन्छौं धेरै जसो गति र वेगको गतिमा आस्तीनका साथ। नोभेम्बर २०२० सम्म, उहाँ हुनुहुन्छ प्रीमियर लीगमा शीर्ष १० खेलाडीहरू मध्येको रूपमा बीबीसी खेल पाठकहरूद्वारा मूल्या rated्कन गरिएको.
प्रशंसकको बावजुद, थोरै व्यक्तिलाई मात्र उनले महानताको यात्राको बारेमा थाहा छ। हामी तपाईको लागि तयार छौं र धेरै समय खर्च नगरी, हामी सुरुको वर्षको कथाबाट सुरु गरौं।
आर्थर मासुआकु बाल्यकाल कहानी:
जीवनी सुरु गर्नेहरूको लागि, उहाँ उपनाम लिनुहुन्छ 'आर्थुरिटो'। फुका-आर्थर मासुआकु कावेला नोभेम्बर १71993 November को नोभेम्बरको XNUMXth तारिखमा उनको बुबा हिक्के मुसुआकु र उत्तरी फ्रान्सको लिली सहरमा एक सानो परिचित आमाको रूपमा जन्मेको थियो। हेर, आर्थर मासुआकुका आमा-बुबामध्ये एक - एक मात्र शर्त र निःस्वार्थ प्रेमको अन्त्य आपूर्तिकर्ता।
फ्रान्सेली जन्मेका फुटबलर आफ्ना भाइहरूसँग लिलीको शहरमा हुर्केका थिए। सानो छँदा ऊसँग यो कडा भाई बहिनी थियो। आर्थरको जीवनको सब भन्दा राम्रो सुरुवात थियो र सामाजिक रूपबाट कहिल्यै छोडिएको थिएन। मिति सम्म, ऊ अझै पनी आफ्ना भाइहरु, परिवार, घर, सडक र स्थानीय फुटबल क्षेत्रहरु को लागी धन्यवाद को लागी उनी बचपन को लागी उदासीन महसुस गर्दछ। तिनीहरूले उनलाई आफूले यात्रा गरेको मार्गको सम्झना गराउँछन्।
आर्थर मासुआकु पारिवारिक पृष्ठभूमि:
हामी आर्थरिटोको फुटबलमा प्रारम्भिक चासो गरिबी बाहेक धेरै चीजहरूलाई श्रेय दिन सक्छौं। विशेषताहरू बीच प्रख्यात तथ्य यो हो कि उहाँको बुबा एक पूर्व फुटबलर थियो। मध्यम वर्गका नागरिकहरू बसोबास गर्ने शहरमा हुर्कदै गरेको मासुआकूको खुसीको याद छ।
आर्थर मासुआकु परिवार मूल:
लोकप्रिय रूपमा उल्लेख गरिएको वेस्ट ह्यामको "ड्रिबलको राजा" समुह, आर्थुरिटोको कole्गोलिस परिवारको जरा रहेको छ उसको फ्रान्सेली मित्रलाई जीन-फिलिप मतेटा। लिली मूल निवासी आमा बुबाका लागि छोरा हो जुन दुबै कo्गोमा जन्मिएका थिए तर उनको जन्म हुनुभन्दा केही वर्ष अघि फ्रान्समा बसाई सरेका थिए। यदि तपाईंलाई थाहा थिएन भने, मसुआकूका आमा-बुबाले उनलाई शहरमा हुर्काए 1 घण्टा 13 मिनेट बेल्जियमको लागि ट्रेनबाट ड्राइभ गर्नुहोस्।
उहाँ बेल्जियमको नजिकैको शहर, लिलमा हुर्कनुभएको थियो।
आर्थर मासुआकु अनटल्ड फुटबल कहानी:
तत्कालीन युवा 8 बर्षको मात्र थियो जब उनले स्थानीय फुटबल लिली ओएमएससँग प्रतिस्पर्धी फुटबलमा पहिलो कदमहरू चाल्यो। यो क्लबमा युवा मासुआकुले आरसी लेन्स भेट्न अघि एक समयको लागि प्रशिक्षण दिए र सोकरमा व्यापक क्यारियर निर्माणको लागि उनलाई सही प्लेटफर्म दिए।
आर्थरिटो १ 15 वर्षको उमेरमा, उसलाई थाहा थियो कि त्यहाँ एक पेशेवर फुटबल खेलाडी बन्न उसको संकल्पमा कुनै पछाडि फर्कने छैन र त्यहाँ एक प्रभावशाली थियो। उनी आरसी लेन्ससँग आफ्नो विकासको चरम सीमामा थिए जब छिमेकी क्लब भ्यालेन्सिएन्सले उसलाई सा -्ग-एट-वा प्रशिक्षण केन्द्रबाट खोसे। के तपाई लामा आर्थर मसुआकुलाई आफ्नो टीमका साथीहरूसँग भ्यालेन्सिएन्समा फोटो खिच्नका लागि भेट्न सक्नुहुन्छ?
आर्थर मासुआकु जीवनी - प्रख्यात कथाको लागि मार्ग:
यो भ्यालेन्सिएन्ससँगै थियो कि आर्थरिटोले ओलम्पियाकोस सर्नु अघि उसको पहिलो व्यावसायिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो। ओलम्पियाकोस आइपुगेको एक बर्ष पछि मासुआकुले इटालियन दिग्गज रोमा र जुभेन्टसबाट चासो लिन थाले। जेनोआ पनि एक प्रस्तावको साथ कल गर्दै आए जुन पनि निस्क्रिय पारियो। तपाईंले ओलम्पियाकोसमा उसको दुर्लभ फोटो देख्नुभयो?
आर्थर मासुआकु जीवनी - प्रख्यात कथा उठ्नुहोस्:
जब पश्चिम ह्यामले पूर्वी लन्डनमा पूर्ण वामपन्थी पछाडि जान चासो देखाए, ओलम्पियाकोस र आर्थुरिटो एजेन्टले रसदार ओडरलाई कुनै भन्न सकेन। सन् २०१ Mas मा मासुआकू mers.२ मिलियन डलरको चार बर्षको सम्झौतामा ह्यामरमा सामेल भए। हेर्नुहोस् वेस्ट ह्याममा आइपुगेपछि डिफेन्डर कस्तो देखिन्थ्यो।
वेस्ट ह्याममा उसको बृद्धि प्रभावशाली छ, जसले क्लबको मनपर्दो बायाँ-पछाडि आफ्नो स्थिति सुरक्षित गरेको छ। क्लरेट र निलो जनताले एक पटक उनलाई "भन्दा राम्रो" भने Lukaku"उनको हमला गर्ने र dribbling मानसिकता को सराहना।
पिचमा हम्मर्सको साथ एक शताब्दी पछि देखा पर उनको बलियो मानसिकता को कुरा, मसुआकूले उनी यसरी जान जारी राख्न चाहन्थे। हामी पक्का आशा गर्छौं कि ऊ बढि रहनेछ डेभिड मोइज ' अपेक्षा र बाँकी, हामी भन्छौं, इतिहास हो।
आर्थर मासुआकु डेटि Who को हो:
त्यहाँ केही व्यक्तिहरू छन् जुन फ्रान्सेली मानिसका कुनै प्रेमिका छैनन् भनेर सहमत हुनेछन्। २ 27 बर्षको उमेरमा, धेरैले विश्वास गर्न चाहान्छन् कि बायाँ वि win्गरले एक प्रेमिकासँग गाँठो बाँध्न तयारी गरिरहेको छ। अझ, मासुआकु पूर्वी लन्डनमा राजा आर्थरको रूपमा प्रख्यात छन्, तर उनको रानी कहाँ छ?
Lifebogger मा, हामी विश्वास गर्दछौं कि फुटबल ताराको जीवनमा पहिले नै एक महिला रहेको छ तर सही समयको लागि प्रतिक्षा गर्दैछ। उनको मात्र होइन, तर बच्चा उहाँबाट जन्मेका कारण त्यसले हामीलाई बुबाको रूपमा प्रहार गर्दछ।
हामी विश्वास गर्दैनौं कि उसको क्यालिबरको एक खेलाडी एक्लो हुन्छ र मायालु छ।
आर्थर मासुआकु पारिवारिक जीवन:
धेरै फुटबलरहरू जस्तै, कole्गोल-वंशमा त्यस्तो व्यक्तिहरू छन् जसले उसलाई हेर्छन् र प्रत्येक क्रिसमसमा उहाँलाई घर चाहिन्छ। तिनीहरू उसको परिवार हुन्। हामी तपाईलाई आर्थर मसुआकूका अभिभावकको बारेमा तथ्यहरु ल्याउँदछौं। हामी तपाईंलाई भाई - बहिनी र आफन्तहरूका बारे तथ्यहरू पनि हिंड्नेछौं।
आर्थर मासुआकू अभिभावकको बारेमा:
जस्तै स्टीभन एन जोन्जी, बायाँ पछाडि पछाडि आमा र बुबा दुबै कo्गोबाट आएका छन्। उनका बुवा हिक्के मुसुआकूको इतिहास फुटबल खेल रहेको छ। हामी मशुआकूलाई स्पष्ट पार्न पर्खिरहेका छौं कि यो पेशेवर हो, अर्ध-पेशेवर वा शौकिया। फेरि, हामी पनि बायाँ विger्गरको आमामा तथ्यहरूको बारेमा उत्सुक छौं जसले हामीलाई तलको फोटोमा मित्रवत व्यक्तिमा प्रहार गर्दछ।
आर्थर मासुआकूकी आमा हेर।
आर्थर मासुआकु भाई बहनहरूको बारेमा:
बाँया पछाडि पछाडि केही शान्त लुकजस्तो भाईहरू छन्, जो उहाँसँग बसिरहेका छन्। चिन्ताको चिन्ताको विषय होइन, मसुआकुले एक विशेष अन्तर्वार्ताको लागि हाम्रो अनुरोध दिंदा तिनीहरू को हुन् भनेर स्पष्ट पार्नेछौं।
भाइबहिनीमा त्यस्तो कामदार आम छ।
आर्थर मासुआकू नातेदारहरूको बारेमा:
बाँया विger्गरको नजिकको परिवारबाट टाढा, हामी अझै उनको मातृ र बुवा हजुरबा हजुरआमाको विवरणका साथ प्रस्तुत हुन सकेका छैनौं। न त हामीले मासुआकूका काका, काकी र काका-काकीहरूका अभिलेख प्राप्त गरेका छौं। त्यस्तै गरी उसको भतिजा तथा भतिजाको कुनै रेकर्ड छैन।
आर्थर मासुआकू निजी जीवन:
त्यहाँ बायाँ पछाडि पछाडि भन्दा आर्थरिटोमा बढी छ। उहाँ टोलीको दाह्री''१० मात्र हुनुहुन्न "टोलीको आक्रमणलाई मद्दत गर्न गहिरो छोड्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ व्यक्तित्वका धेरै विशेषताहरू छन् जुन तिनका साथीहरू र परिवारका सदस्यहरू उसको स्वभावको आत्म-स्पष्ट मान्दछन्। तीनिहरुमा उनको रमाईलोपन, ईमानदारी र वफादारी शामिल छ।
ऊ अत्यन्तै महत्वाकांक्षी पनि छ र साहसी खतरादेखि डराउँदैन। मसुआकूसँग फेसनको लागि चीज छ, यात्रा मन पराउछ, प्रियजनहरूसँग समय र अन्य रुचिहरू र रुचिहरूमा समय खर्च गर्न।
केवल एक डिफेन्डिंग उस्ताद होइन तर एक फैशनिस्टा!
आर्थर मासुआकु जीवनशैली:
एक शीर्ष उडान एथलीट हुनुको के अर्थ छ यदि एक आर्थरिटो जस्तै £ 40,000 पाउन्ड को साप्ताहिक ज्याला कमाउन सक्दैन? Large २,०2,080,000०,००० (वार्षिक) कमाउने प्रिमियर लिग खेलाडी कती ठूलो हुन सक्छ? आउनुहोस् पत्ता लगाऔं।
बायो स्टार्टर्सहरूको लागि, मसुआकू प्रायोजन र समर्थनको वित्तीय फाइदाहरूको आनन्द लिन्छन्? यसले थप वर्णन गर्दछ कि किन उनीसँग दिवालियापनको चिन्ता छैन उसको विशाल सम्पत्ति १० मिलियन पाउन्डको साथ।
त्यस्तो धनको साथमा, पूर्वी लन्डनको सडकका लागि विदेशी गाडीहरूमा नेभगेट देख्न वा राजाको लागि उपयुक्त अपार्टमेन्ट / घरमा बस्नु भएको देखेर तपाईं छक्क पर्नु हुँदैन। हामीसँग यो कुरा थाहा पाउँदा छक्क पर्दैन कि ऊसँग एउटा जेट पनि एक हैंगरमा चिसो थियो। आर्थर मासुआकूको कारले कसरी ड्राइभिंग सजिलो बनाउँदछ हेर्नुहोस्।
आर्थर मासुआकुका बारे तथ्यहरू:
यो चाखलाग्दो टुक्रालाई उसको बाल्यकाल कहानी र जीवनीमा समेट्न, यहाँ उहाँबारे थोरै-ज्ञात वा अनटल्ड सत्यहरू छन्।
अनुसन्धानले देखाए अनुसार औसत डीआरसी नागरिकहरूले दुई हप्तासम्म काम गर्नुपर्नेछ आर्थर मासुआकुले हप्तामा जे कमाउँछन्।
प्रति महिना £ 173,333
प्रति हप्ता £ 40,000
प्रति दिन £ 5,714
प्रति घण्टा £ 238
प्रति मिनेट £ 3.97
प्रति सेकेन्ड £ 0.06
किनकि तपाईंले आर्थर मासुआकू देख्न शुरू गर्नुभयोबायो, यो उसले कमाएको हो।
इसाईको रूपमा मसुआकुलाई वर्गीकृत गर्न सजिलो भए पनि, उनको दाह्रीले शंकाको लागि ठाउँ छोड्दछ। यद्यपि कुनै नराम्रो असरको बाबजुद पनि उहाँ इसाई भएको पक्षमा झुकाव राख्नुहुन्छ। तिम्रो के बिचार छ? तपाईंको विचारहरू टिप्पणी बाकसमा साझा गर्नुहोस्।
तथ्य # १ - उनी फिफामा रेखांकित छन्:
आर्थर २ अंक मुनि छ डेक्लान चावल २०२० फिफा स्कोर (2020)) र points अ below्क उसको सम्भावित () 79) भन्दा कम। यो याद गर्न अपमानजनक छ कि फिफाले आक्रमणमा अवरोध खेलाडीलाई कम रेटिंगहरू दियो, राम्रो बचाव र शारीरिक रूपमा। हामी कसरी युवा पुस्तालाई बुझाउन सक्छौं कि मासुआकूको समग्र रेटिंग rating 8 र २०२० मा 86 77 को सम्भावित थियो? यो त्यस्तो उत्तम चर्चा हो कहिले पनि आउँदैन!
अन्याय यति स्पष्ट कहिल्यै भएको छैन
आर्थर मासुआकुको जीवनी र अनकहाएको बचपनको कथामा यो जानकारीमूलक अंश पढ्नको लागि धन्यबाद। हामी आशा गर्दछौं कि यसले तपाईलाई विश्वास गर्न हौसला प्रदान गर्दछ कि सफलता स्थिरता को माध्यम बाट आउन सक्छ। यो मासुआकुको सफलताको रहस्य हो- एक मान्छे जसले माइलस्टोनमा हिर्काएर आफ्नो छाप बनायो आफ्नो क्यारियर मा।
डिफेन्डरका अभिभावक र भाइहरूको प्रशंसालाई अब उनी आफ्नो क्यारियरमा उनको अतुलनीय समर्थन गर्दछन्। उहाँमा उनीहरूको विश्वास कहिल्यै स्ट्रिम फुटबल सुरु भएको समय देखि कहिल्यै प्रीमियर लिगमा नपुग्दासम्म घटेन।
Lifebogger मा, हामी निष्पक्षता र सटीकताका साथ कथाहरू वितरण गर्नमा गर्व गर्छौं। यदि तपाईले केहि देख्नु भयो कि ठीक लाग्दैन भने, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। अन्यथा, हामीलाई थाहा दिनुहोस् कि तपाईं त्यसबारे के टिप्पणी खण्डमा सोच्नुहुन्छ।
अन्तमा, आर्थर मसुआकूको बायो को द्रुत पकड प्राप्त गर्न, हाम्रो विकी तालिका प्रयोग गर्नुहोस्। यसले उसको प्रोफाइल संक्षिप्त गर्दछ।
पुरा नाम: फुका-आर्थर मासुआकु कावेला।
जन्म मिति: नोभेम्बर १71993 XNUMXth को सातौं दिन।
जन्मस्थान: फ्रान्स मा लिली को शहर।
सेमी मा उचाई: 179 सेमी।
खेल्ने स्थिति: बाँया पछाडि, बाँया पखेटा फिर्ता, बाँया विger्गर।
अभिभावक: Hikke Musuaku (बुबा)
रुचि: यात्रा, प्रियजनहरूसँग समय बिताउने।
नेट मूल्य: M १० मिलियन